Vaovao - Navoaka ny fandrarana ny plastika ary may ny kitapo voajanahary 100%!
Navoaka ny fandrarana ny plastika ary may ny kitapo voajanahary 100%!
Ny Parlemanta eropeana dia nandany tamin'ny fomba mahery vaika ny fandrarana ny plastika, ary firenena / faritra 15 no namoaka ny fandrarana ny plastika. Mihabetsaka ny firenena no miditra amin'ny laharam-pahamehana, ary nanjary fironana mafana ny fanentanana ny tontolo iainana! Ny vokatra plastika dia mampiasa solika toy ny akora, ary ny loharanom-pahalalana dia zara raha mihena. Ny tahan'ny fanodinana vokatra plastika dia ambany dia ambany, ary sarotra ny manodina. Ny fandoroana vokatra plastika dia miteraka gazy misy poizina sy manimba, manimba ny ain'ny olombelona sy ny fahasalamany, ary mandoto ny natiora, ary nahatonga tafio-drivotra fako fotsy! Long Juntian Pure Environmental Protection Company dia mahafantatra tsara ny loza ateraky ny fako fotsy ary mamaly mavitrika ny antson'ny firenena sy ny fikambanana mpiaro ny tontolo iainana manerantany. Taorian'ny folo taona mahery tamin'ny fambolena lalina ireo harona fako biodegradable, dia namolavola sy namokatra kitapo mampiasa zana-katsaka sy PBAT ho akora izahay. Ity kitapo fako ity dia azo ovaina ho lasa dioksidan'ny karbaona sy rano ao anatin'ny fepetra fananganana indostrialy mety.
Ny kitapo fako biby afaka mihinana 100% dia tombony tsotra ho an'ireo mandeha alika. Tsy mila miahiahy momba ny fanadiovana ny tampon'alika intsony izy ireo amin'ny valan-javaboary sy ny toerana fitobiana. Azo diovina tanteraka izy io raha tsy tanana maloto sy tsy tantera-drano. Izy io koa dia afaka miaro ny tontolo iainana sy mitandrina ny fahadiovana. Ity kitapo fako ity dia mampiasa famolavolana fihenam-bidy, miaraka amin'ny tampony malefaka sy marefo, tsy tantera-drano ary tsy misy fofona, ary ny atiny anatiny koa dia fotodrafitrasa vita amin'ny taratasy mora simba, izay miaro ny tontolo iainana avy any ivelany. Izy io koa dia heverina fatratra amin'ny fampiasana azy, ary ny mpampiasa dia manana dispenser, izay azo ahantona amin'ny tady mahazaka mba tsy hitehirizany ny tanany.
Longjun Tianchun Environmental Protection Company dia afaka manaiky OEM, ODM, mahafeno ny filan'ny mpampiasa azy manokana ary manompo ny mpanjifa miorina amin'ny fitsipiky ny fiaraha-miasa matotra. Miarahaba antsika rehetra hanantona sy hividy.